General Archives - For Her Myanmar
General	Food and Drink, General
မနှစ်က ဒီလိုအချိန်ထိ ဖေဖေ ရယ် မေမေရယ် သမီးတို့ ညီအစ်မ (၂) ယောက်ရယ် တစ်အိမ်ထဲ တစ်မိုးအောက်ထဲမှာ ရှိတာလေးကို တစ်ဝိုင်းထဲတူတူစားရင်း ရှိနေခဲ့သေးတယ်နော်။ ခုတော့…
General, Learning, Love
ကပ်စေးနည်း ကိုကိုတွေကို ပြန်ကြိုက်မိတဲ့အခါ ဘယ်လိုအခက်အခဲ ဒုက္ခတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရမလဲ။ အချစ်ရယ်လို့ ဖြစ်လာကတည်းက ခွဲခြားမှု မရှိပါဘူး။ ချစ်တတ်တဲ့ နှလုံးသားရှိရင် အိုကေစိုပြည်ပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ်ရွေးတဲ့လူရဲ့…
“ပဲများချင်လို့ပေါ့၊ လှချင်လို့ပေါ့” ဆိုတာထက် အခြားနက်နဲတဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေရှိနေသေးပါတယ်။ မိန်းကလေးတိုင်းအလှကြိုက်တတ်ကြတယ်ဆိုတာ အရက်မူးပြီးအိပ်နေတဲ့သူကိုတောင် ခေါင်းခေါက်မေးလို့ရပါတယ်။ ဒါဟာ သဘာဝရဲ့ လှုံ့ဆော်မှုပါ။ မိတ်ကပ်ဆိုတာ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အလှကို…
သောကြာ ၁၃ နဲ့ပတ်သတ်ပြီး အယူးသည်းခြင်းနှင့် အမှန်တရားများ ကဲ..ဒီနေ့ ၁၃ရက်နေ့ သောကြာဆိုတာ သတိထားမိရဲ့လား။ အနောက်တိုင်း အယူအနေနဲ့ သောကြာနေ့ဟာ ၁၃ရက်နေ့ဖြစ်ရင် ကံဆိုးတယ်လို့ယူဆကြပါတယ်။ သောကြာနဲ့…
ပျိုမေတို့အနေနဲ့ ခွေး၊ ကြောင်မွေးခြင်းဖြင့် စိတ်ရော ကိုယ်ပါ ကျန်းမာခြင်းစေကြောင်း ဖတ်ရှု မှတ်သားစေလိုပါတယ်။ အိမ်မွေး တိရစ္ဆာန်ချစ်တတ်သူတွေဟာ သာမန်လူတွေထက်တော့ အနည်းငယ် ထူးခြားချက်ကလေးတွေရှိတတ်ကြပါတယ်။ သူတို့အနေနဲ့ တိရစ္ဆာန်လေးတွေဟာ…
၂၀၁၇ မှာ ရာသီဖွားတို့ ကံကြမ္မာ
၂၀၁၇ အတွက် ပျိုမေတို့ရဲ့ကံကြမ္မာ ဘာတွေပြောင်းလဲမှာလဲ…ကံကောင်းမယ့်နှစ်လား ဘဝအတွက် အပြောင်းအလဲတွေများမယ့်နှစ်လား???? ၂၀၁၇ မှာ ဘာတွေကြိုတင်ပြင်ဆင်ရမလဲ။ အလုပ်မှာ အဆင်ပြေနိုင်မလား..အပျိုကြီးတွေ အစွံထုတ်နိုင်မလား ရှိုးကြည့်လိုက်နော်။ မြိဿရာသီဖွား(မတ် ၂၁-ဧပြီ…
နှစ်သစ်မရောက်ခင် ဘာတွေကို နှစ်ဟောင်းမှာပဲ ထားခဲ့သင့်လဲ?
၂၀၁၇ ကို ပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းနိုင်ဖို့ ဒါလေးတွေ လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ (၁) ၂၀၁၆က အလုပ်တွေ ၂၀၁၇ထိ မသယ်ပါနဲ့။ ဒီလို သယ်ခြင်းဟာ အချိန်ဆွဲခြင်းတစ်မျိုးပါပဲ။ သင်ဟာ…